computer ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများ
Posted by anyartharlay on Saturday, July 9, 2011,
Gtalk Profile Website ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာရှိနေတဲ့ Gtalk အသုံးပြုတဲ့သူတွေရဲ့ Profile တွေကို ရှာပေးနိုင်ပါတယ်။ Profile မှာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အနည်းအကျဉ်းနဲ့ Email လိပ်စာ ပါဝင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် Profile တစ်ခုက�...
မိမိရဲ blog မှာ dancer လေးတွေထည့်ချင်ရင်
Posted by anyartharlay on Friday, July 8, 2011,
<a href="http://www.widgia.com/" target="_blank"><img src="http://widgia.com/wp-content/uploads/2009/10/dancing-icon-002.gif" border="0"ဒီ code လေးတွေကို copy လုပ် paste လုပ်လိုက်......code မှာ 002 နေရာမှာ ဂဏန်းလေးတွေ ပြောင်းလိုက်ရင် dancer လေးတွေလည်း ပြောင်းသွားပါတယ်...........ဥပမာ 003,004,005,006...............အ...
start=All Program=Acceessories=System tool=System Recovery နှိပ်ပြီး အဆင်ပြေတဲ့ ရက်စွဲ တခုခုကိုရွေး Next ကိုနှိပ် Finished ကိုနှိပ်ပါ..........အဆင်ပြေပါစေဗျာ
ရှာဖွေလို့ရသမျှ Free Hosting Site တွေကို စုစည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိမိဘာသာမိမိ web site လုပ်လိုသူများ အတွက်ရော၊ ကလိချင် သူတွေရော၊ My SQL Server ရတဲ့ Free Hosting ရှာဖွေနေသူတွေရော ၊ စတဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ Free Hos...
Posted by anyartharlay on Tuesday, July 5, 2011,
ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ Cbox မှာတောင်းထားတဲ့သူငယ်ချင်းလေးအတွက်ပါကောင်း
လွယ်လွယ်လေးပါ NotePad နဲ့ ရေးထားတဲ့ကုဒ်တွေသုံးရုံပါပဲသူများ
AGP – Accelerated Graphic Port
BIOS – Basic Input / Output System
DDR2 – Double Data Rate2
DVD – Digital Video...
Start Menu ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စေဖို့
Start ကိုနှိပ်ပါ။ Run box ကိုဖွင့်ပါ။ Regedit လို့ရိုက်ပါ။ (Registry editor ကိုဆိုလိုတာပါ။)
ဘယ်ဘက် panel မှာ “HEYCURRENT USER” ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ အဲဒီထဲ ကမှ “control panel” ကို ထပ်ရွေးပါ။ “Control panel” ထဲကမှ Desktop ကို ရွေးပါ။ ညာဘက်အကွက်မှာ ...
မြန်မြန်ဆန်ဆန် Lock လုပ်နည်း
‘Ctrl + Alt + Del’ ကို တွဲဖက်နှိပ်ရင် ‘Task Manger’ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအထဲကမှ “Log-Off” ကို ရွေးချယ်ပြီး အမြန် Lock လုပ်နိုင်ပါတယ်။
- Kkeyboard က windows Logo Key လေးကို ဖိထားပါ။ ‘L’ ကို နှိပ်ပါ�...
‘Virtual memory’ တည်ဆောက်ခြင်း
တစ်ပတ်တစ်ခါ defragment လုပ်ပါ။
- Analyzing လုပ်တာနဲ့ Defragment လုပ်တာ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ နာရီဝက်၊ တစ်နာရီလောက် အချိန် ပေးရပါမယ်။ ဒီ tool ဟာ window နဲ့ ‘built-in’ tool ဖြစ်ပြီး System မှာရှိတဲ့ မလိုအပ်တဲ�...
Entry တွေကို ရှင်းလင်းပါ။
- Uninstall ဆိုပြီးပေါ်လာပါမယ်။အဲဒီထဲမှာ ကိ�...
Screen Saver ကို Slide Show လုပ်နိုင်ပါတယ်။
- နောက်ဆိုရင် Screen Saver ဟာ ရုပ်ရှင်တွေ ပြသလိုမျိုး ပုံရိပ်တွေ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး မရိုးနိူင်အောင် ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
- (My Picture folder ထဲမှာ ကိုယ�...
Print Screen သို့မဟုတ် Capture ဖမ်းယူခြင်း
ကွန်ပျူတာပေါ်က မြင်းကွင်းတစ်ခုခုကို ပုံရိပ်အနေနဲ့ ကူးယူပြီး ကိုယ့်အတွက် ပြန်လည်၍ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
- လိုချင်တဲ့ image ဒါမှမဟုတ် webpage ကို ဖွင့်ပါ။
- Keyboard က ‘print screen preview’ ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ (ဖွင့�...
Network အတွင်းလေ့လာ ကြည့်ခြင်း
ကိုယ့်ရဲ့ network ဧရိယာ များမှာ ဘယ်သူတွေ ရှိနေသလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရှုချင်ရင် My Network places ကနေ ကြည့်ရှုလို့ ရပါတယ်။ ပီစီတစ်လုံးကနေ နောက်တစ်လုံး ဆီကို access လုပ်ဖို့ ကို တော့ admin ခွင့်ပြုချက် ဒါမှမဟုတ် password...
Shift + Delete ကို သတိထားပါ။
ရိုးရိုး Delete ဟာ ဖိုင်တစ်ခုကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပေမယ့် အမှိုက်ပုံးထဲမှာ ကိုယ်စားကျန်ပါသေးတယ်။ Shift Key ကို သတိထားပြီး Delete ခလုတ်ကို နှိပ်ချလိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ အပြီးတိုင် ဖျက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ�...
Font အရွယ်အစား ပြောင်းလဲ ကြည့်နိုင်ရန်
- Ctrl ကို ဖိထားရင�...
Fonts တွေကို ခဏ ဖယ်ထုတ်ထားပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ တချို့  Fonts တွေဟာ ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ်ဟာ စာစီစာရိုက် သမားတစ်ယောက်၊ Web designer တစ်ယောက်မဟုတ်ရင် မလိုအပ်တဲ့ font တွေကို အပြီးတိုင် ဖယ်ထုတ်ထားလို့ ရပါတယ်။ Photoshop လို ပရိုဂရမ်မျို�...
‘Shut-down’ shortcut ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်
- ပြီးရင် properties ကို သွားပါ။ Target နေရာမှာ “C:/Windows/system32/shutdown.exe”ကို ရွေးပေးပါ။ (XP.SP2 သမားတွေအတွက်တော့ အလွယ်တကူနဲ့ C > Windows > System32 > “shut...
Memory ပိုမို အလုပ်လုပ်စေနိုင်ဖို့
- XP ရဲ့ default မှာ memory ရေရှည် အသုံးခံနိုင်အောင်နဲ့ တခြား လိုအပ်တဲ့ စနစ်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွေကို မောင်းနှင်ဖို့ စီမံထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်အတွက် အသုံးမ၀င်ပါဘူး။ ရှိရင်းစွဲ memory...
မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ရှင်းပစ်
- - Start ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- Run box ကိုဖွင့်ပါ်။
- “% temp%” လို့ ရိုက်ထည့်ပါ။
- အဲဒီမှာ တွေ့သမျှ ဖိုင်တွေကို ‘Ctrl+A’ နဲ့ Select ပေးပြီး ဖျက်ထုတ်ပစ်ပါ။ (အချို့  လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖိုင်တွေကိုတော့ ဖျက်လို့မရတဲ့ အ�...
hard disk ရှင်းလင်းနည်း
Hard disk ကို အချိန်ရှိသရွေ့  ရှင်းလင်းပေးပါ။
- Accessories ကနေတစ်ဆင့် “System tools” အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ “Disk Clean Up” ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ ၅ မိနှစ်အတွင်းမှာ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေ မှန်သမှ�...
computer လေးနေတာ မြန်ချင်ရင်
Posted by anyartharlay on Sunday, July 3, 2011,
အရင်3.8.0 Version ကနေအခု4.0ထွက်လာပါပြီအရင်ထက်ပိုပြီးအဆင်ပြေလာပါ
Virus တွေကိုရှင်းထုတ်ပေးဖို့ အရမ်းသင့်တော်ပါတယ်ကွန်ပျူ�...
Lock လွယ်လွယ် ချဖို့......
Mouse ကို နှစ်ချက်လေးမျှ နှိပ်ရုံဖြင့် XP အလုပ်ရုံကြီးတစ်ခုလုံးကို
သင်၏ desktop ပေါ်မှာ mouse ၏ ညာဖက် click နှိပ်ကာ
shortcut တစ်ခုကိုဖန်တီးပြီး သင့်စိတ်ကြိုက်အမည်ပေးပါ�...
မိမိ gtalk ကို ဘယ်လို ကာကွယ်ကြမလဲ....
Posted by anyartharlay on Saturday, July 2, 2011,
ကျနော် ရေးတာတော. မဟုတ်ပါဘူး၊
လို လို မယ် မယ် ပေါ.။
ဆိုင်ဘာမှ သုံးသူများ အတွက် (သို့) သူများ PC မှာ သုံးမယ်ဆိုရင်။
တော်တော်များများက Gmail password hack မယ်ဆိုတာနဲ့ အရမ်း...
* CTRL + Mousewheel up/down: Chat
Box အတွင်းရှိ Font size ကို ပြောင်းပေးသည်။
* ချက်ပြောနေရင်းနဲ့ Call ခေါ်ချင်ရင် F9 နှိပ်ပါ။
* Call ပြန်ပိတ်ဖို့ F12 ကို နှိပ်ပါ။
* ချက်ပြောတာကနေ ထွက်ဖို့ Esc ကို နှိပ်ပါ။
* ချက် window တွေကို mini...
gtalk မှာ မိမိနာမည် မကျန်စေချင်ရင်
G-talk တွင် မိမိ နာမည် မကျန်စေချင်ရင်G-talk သုံးတဲ့အခါမှာ မိမိ ရဲ့ Gmail Address သုံးတဲ့စက်ထဲမှာမကျန်ခဲ့အောင်အသုံးပြုနည်းရှိပါတယ်။
၁။ အရင်ဦးဆုံး Start ထဲက Run ကို နှိပ်ပါ။ ( သို့မဟုတ် ) Window+R ကိုတွဲဖိပါ။
gtalk မှာ idle လုပ်ချင်သူများအတွက်
gtalk မှာအမြဲတမ်း idle လုပ်ချင်သူများအတွက်............http://devilsworkshop.org/remain-always-idle-on-google-talk-free-download/ ဒီမှာ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်...ဒေါင်းပြီးရင်တော့ ရမ်းလိုက်ပါနော်ရမ်းပြီးရင်တော့အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း
start barပေါ်ကGtalk ic...
Gtalk ကနေ လူတွေ အများကြီးနဲ့ Conference ပြောကြရအောင် ……
လုပ်မည့် သူရဲ့ အလ�...
window7မှာအသံထွက်ဖို့
Windows7မှာ အသံ gtalk ပြောတဲ့ အခါ အသံမထွက်ဘူး ဆိုပြီး ပြောနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အသံမထွက်ဘူး ဆိုပြီး ပြောနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ထုတ်ပြီး စာမရေးဖြစ်လို့ ကြာနေခဲ့ပါတယ်။ အားလည်း နာတယ်။ ခင်လည်း ခင�...
နိူင်ငံတွေရဲ့ code တွေကိုသိချင်ရင်
နိူင်ငံတွေရဲ့ code တွေကိုသိချင်ရင် http://www.thelist.com/ ကိုသွားရောက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
အဂ်လိပ်-မြန်မာ dictionary လေးပါ....တော်တော်လေးသုံးလို့ကောင်းပါတယ်....
ကျွန်တော် အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ ၊ မြန်မာ - အင်္ဂလိပ် ၂ မျိုးစလုံး အပြန်အလှန် အသုံးပြုနိုင်တဲ့...
Posted by anyartharlay on Saturday, July 2, 2011, In : မြန်မာ
laptop မှာ myanmar font ရှိပြီးသားသူများအတွက် မိမိ computer ရဲ့ files တွေ folder တွေကို မြန်မာလိုရေးချင်တယ်ဆိုရင် ......laptop ရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်က start ကို click လုပ်ပါ..ပြီးရင် search ထဲမှာ display ဆိုပြီး ရိုက်ထဲ့လိုက်ပါ.. display ပေါ်လ�...
ဖတ်ရှုစရာ blog များ
လင့်ခ်များ မောင်စွယ်စုံကျမ်း ရန်အောင် CNN News လေ ဒါကတော့ ကိုဂူဂယ်လ်ခင်ဗျ မြန်မာ ဇာတ်လမ်းများ Shweo မြန်မာ၊နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းများ ကိုဇော် ချစ်သူမြို့တော် မြန်မာmp3သီချင်းများ
ကျွှန်တော်အကြောင်းကို ပြောရရင်တော့ ................